Karazana vokatra inona no anaovan'ny KingHow?
Manana lisitra feno amin'ny vokatra izay amboarinay izahay, fa ao anaty kitapo indrindra no misy anay. Kitapo kitapo, kitapo duffel, kitapo fanaovana fanatanjahan-tena, kitapo fitaovana, kitapo mangatsiaka sns.
Karazan-damba sy marika inona no iasan'ny KingHow?
Polyester, Nylon, Canvas, Oxford, ny Ripstop nylon fanoherana rano, ny hoditra PU no lamba fanaonay mahazatra indrindra. Misy marika amin'ny fanontana sy peta-kofehy. King How dia manana traikefa be dia be amin'ny loharano izay ilaina rehetra hanamboarana ny vokatrao. Raha manana fepetra takiana manokana momba izany izahay dia afaka mahita azy ho anao.
Inona ny fotoana mitarika mahazatra amin'ny santionany na baiko iray?
Matetika, ny santionany dia mila 7-10 andro. Ny fotoana itarihana mahazatra ho an'ny entana namboarina dia 4-6 herinandro miankina amin'ny filan'ny fanjairana, habetsahana ary fisian'ny akora mahazatra. Raha misy ny baiko maika, dia hiara-miasa aminao izahay araka izay tratranay mba hahafeno ny fepetra takian'ny datin'ny sambo.
Manamboatra na mampivelatra vokatra ho an'ny mpanjifa ve ny KingHow?
Raha ny marina dia tsy mamolavola sy mamorona vokatra vaovao ho an'ny mpanjifa izahay. Fa izahay kosa dia hanampy ny mpanjifanay hanao io asa io, amin'ny traikefanay dia afaka manome sosokevitra momba ny vokatra izahay ary hanampy amin'ny fitadiavana vahaolana hahazoana fanapahan-kevitra tsara indrindra.
Manome santionany ve i KingHow?
Ny santionany maimaimpoana ara-dalàna, fa raha manaova zavatra sarotra na mila bobongolo misokatra, dia tokony hanana sarany handoavana ny vidin'ny fivoaran'ny lamina, ny fametrahana ny bobongolo ary ny fividianana fitaovana. Rehefa apetraka ny kaomandy dia hesorina amin'ny vidin'ny kaomandy ny saram-pitsaboana, ary omena santionany mialoha ny famokarana alohan'ny fisoratana anarana alohan'ny hanombohan'ny famokarana.
Misy fatra kely indrindra amin'ny fanafarana?
Ho an'ny entana vita pirinty na natao pirinty, ny isa farafaharatsiny mba 100 na 500 $. Miezaka mandray ny mpanjifa izahay isaky ny azo atao. Na izany aza, raha tsy voaorina ny famokarana anay handraisana tsara ny vokatrao, dia mety hitaky habe lehibe kokoa izahay handoavana ny vidin'ny fanamboarana.
Moa ve i KingHow manome ny akora ilaina rehetra hamoronana entana?
King How dia tena malefaka amin'ny fividianana akora ilaina amin'ny vokatrao. Amin'ny alàlan'ny tamba-jotra mpamatsy anay dia afaka mamatsy izay fitaovana rehetra amin'ny vidiny lafo izahay. Etsy ankilany, raha misy mpanjifa te-hamatsy ireo fitaovana ho anay, faly izahay mandray azy ireo. Ho an'ny fitaovana tsy manam-paharoa na zavatra sarotra tadiavina dia hiara-miasa aminao izahay hamaritana ny tetika fividianana tsara indrindra.
Inona no fe-potoana takiana amin'ny KingHow?
King How dia mangataka referansa momba ny trosa amin'ny mpanjifa vaovao rehetra ary manatanteraka fanamarinana trosa alohan'ny hanombohana ny asa amin'ny laharana voalohany. Matetika izahay dia mangataka fandoavana 30-50% amin'ny kaomandinao voalohany. Alohan'ny handefasana ny baiko, KingHow dia handefa faktiora ho an'ny mizana. Ho an'ny fandaminana indray dia afaka mametraka tahiry 30% sy fifandanjana 70% amin'ny kopian'ny B / L isika.